Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguHébergia
Olu lwakhiwo luhle luka-2018 olunenkangeleko yangoku luya kuhlangabezana neemfuno zakho ezinkulu ngelixa ungqongwe yindalo. I-chalet ibonelela ngombono ovulekileyo, ukukhanya okuninzi kunye nabo bonke ubutofotofo obufunayo ukwenza ukuhlala kwakho okulandelayo kube yeyona ndawo ifanelekileyo yokubaleka!
Ibekwe ngaphantsi kwemizuzu eli-10 ukusuka eMont Orford kwindawo enkulu enemithi, ungonwabela izinto ezintle zangaphandle.
Umbuki zindwendwe ngu- Hébergia
I-Hostia izinikele ekwanelisekeni kwakho kwaye inika isiqinisekiso sokuzithemba. Senza konke okusemandleni ethu ukuqinisekisa ukuba ukuhlala kwakho kumnandi kangangoko. Nangona kunjalo, ukuba kukho ingxaki ngexesha lokuhlala kwakho, iqela lethu lenkxaso, elikhoyo iintsuku ezi-7 ngeveki, liya kwenza konke okusemandleni ukulungisa le meko. Xa ubhukisha i-chalet kunye no-Héberia, unokuqiniseka ukuba le chalet yeyona nto uza kuyifumana apho. Iipropati zihlolwa rhoqo ukuqinisekisa ukusebenza ngokufanelekileyo kwezixhobo kunye nokugcinwa kwezakhiwo. Ugcino lwendlu olugadwayo lwenziwa ngendlela yobuchule.
I-Hostia izinikele ekwanelisekeni kwakho kwaye inika isiqinisekiso sokuzithemba. Senza konke okusemandleni ethu ukuqinisekisa ukuba ukuhlala kwakho kumnandi kangangoko. Nangona kun…
Inombolo yomthetho: 299769
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$780